Maitiro ekuona Disney + paTV, Emulator.online ▷ 🥇
Maitiro ekuona Disney + paTV
Disney + yakatanga nekubudirira kukuru kuruzhinji zvakare muItari, nekuti inosanganisa makatuni akanakisa evana (kubva kune akakura echinyakare kuenda kuzvigadzirwa zvitsva zvePstrong) neakasarudzika TV akateedzana anoenderana nenyika ye Star Wars, pasina kukanganwa zvese Marvel mafirimu. Kunyangwe paine makwikwi anotyisa kubva kuNetflix neAmazon Prime Vhidhiyo, vashandisi vazhinji vanosarudza kuchengeta Disney + seye-inoda kubhadharisa kunyorera yemhuri yese, zvakare yakapihwa mutengo wekukwikwidza (parizvino € 6,99 pamwedzi kana kunyoreswa kwegore kwe69,99, € XNUMX).
Kana kusvika parizvino takazvikwanira kuti tione Disney + zvemukati chete kubva paPC kana kunyanya kubva pahwendefa, tine nhau dzakanaka kwazvo kwauri: tinogona gadzira Disney + pane chero TVEvha Smart TV kana yakapfava yakapfava skrini yeTV (chero bedzi iine HDMI chiteshi). Nekudaro, ngatione pamwe chete maitiro ekuona Disney + paTV, kufadza vese vana nevabereki vanofarira zvemukati mehukuru hwepuratifomu iyi.
VERENGA ZVIMWE: Disney Plus kana Netflix? Chii chiri nani uye misiyano
Tarisa Disney + paTV
Iyo Disney + app inowanikwa pane yakawanda nhamba yemahara yekuvaraidza ekushandisa, senge Smart TVs uye zvishandiso zvine HDMI kubatana, pamwe mukana zvakare tora mukana we4K UHD uye HDR yakakwira tsananguro yezvinyorwa (kana mamiriro enetiweki nemidziyo yakashandiswa ichibvumira). Kana isu tisati tave neDisney + account izvozvi, zvakanaka kuti titore imwe usati waverenga iwo mazano mune zvitsauko zveichi gwara; Kuti unyore account nyowani, ingo enda kune yepamutemo kunyoresa saiti, isa inoshanda kero yeemail uye uteedzere rairo yakapihwa pachiratidziri.
Disney + pane Smart TV
Kana tiinayo imwe Ichangobva kuitika Smart TV (LG, Samsung kana Android TV) tinogona kunakidzwa neDisney + zvirimo nekuwana chitoro chekushandisa uye nekutsvaga kunyorera Disney +.
Mushure mekuisa iko kunyorera, tinya bhatani pane iri kure control kuti uvhure iyo Smart chikamu, tinya iyo Disney + application uye pinda mukati uine humbowo hwatinahwo. Kubva paSmart TV tinogona kubatsirwa kubva pane zvese zvirimo padanho repamusoro, tichitora mukana (kana terevhizheni ichienderana) zvakare iyo Ultra yepamusoro tsananguro 4K UHD neHDR; Kuti uwane yemhando yepamusoro, inodikanwa kwazvo internet kubatana (inokwana makumi maviri neshanu Mbps kurodha pasi), zvikasadaro zvirimo zvinotambiswa neyakajairika mhando (25p kana kutodzika). Kuti uwane rumwe ruzivo, tinokurudzira kuverenga gwara redu. Maitiro ekubatanidza Smart TV kuInternet.
Disney + pamutambo wekunyaradza
Kana isu tikabatana yazvino mutambo mutambo (PS4, Xbox One, PS5 kana Xbox Series X / S.), tinogona kuishandisa kuona zvirimo zveDisney + mukumbomira pakati peimwe chikamu chemutambo neumwe, uchibatsirwa nemhando imwecheteyo yatichawana pane Smart TV.
Tine console yakatobatanidzwa kuterevhizheni kuburikidza neHDMI, tinogona kuona izvo zveDisney + nekutitora kuenda kubhokisi renyaradzo (nekudzvanya bhatani rePS kana bhatani reXBox), kuvhura chikamu Kushanda O Applications uye kuvhura iko kunyorera Disney +, yatovepo nekukasira mune ese nyaradzo ataurwa. Kana tisingakwanise kuwana iyo yakaiswa app, zvese zvatinofanirwa kuita kuvhura yekutamba chitoro kana yekutsvaga bhatani uye nekutsvaga iyo app. Disney + pakati pezviripo. Kunyangwe pazvinyaradzo zvinokwanisika kutora mukana we4K UHD neHDR (kana iyo TV ichienderanawo), asi chete kana isu tine shanduro dzakasimba kwazvo dzenyaradzo dziri kutengeswa (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 uye Xbox Series X / S) .
Disney + yako Moto TV Tanda
Kana isu tisina Smart TV kana application yakatsaurirwa isipo, tinogona kukurumidza kuigadzira nekubatanidza iyo dongle Moto TV Tsvimbo, inowanikwa paAmazon isingasviki € 30.
Mushure mekubatanidza Moto TV kuTV (uchitevera rairo dzinoonekwa mune yedu yakatsaurwa gwara), Sarudza sosi chaiyo paTV, vhura chikamu Applications, isu tinotsvaga Disney + pakati peavo varipo nekumira uye pinda mukati. Moto TV Inonamira nguva dzose uye zvishandiso zveLite zvinotsigira zvemhando yepamusoro zvemukati (1080p kana pasi); kana isu tichida Disney + zvemukati mu4K UHD isu tichafanirwa kutarisa Moto TV Inobata 4K Ultra HD, inowanikwa paAmazon nemutengo wakakwirira (€ 60).
Disney + yako Chromecast
Chimwe chishandiso chakakurumbira chekutepfenyura icho chave kuwanikwa mudzimba dzese ndeche Google Chromecast, inowanikwa zvakananga paGoogle saiti.
Mushure mekubatanidza iyo HDMI dongle kuTV uye kumba Wi-Fi, isu tinovhura iyo Disney + application pane yedu smartphone kana piritsi (tinokuyeuchidza kuti iko kunyorera kunowanikwa kweApple uye neiyo iPhone / iPad), isu tinopinda mukati nemasaiti ebasa, tinosarudza zvirimo kuti zvibudiswe zvakare uye, nekukurumidza pazvinowanikwa, tinodzvanya bhatani riri kumusoro Kubuda, kuendesa vhidhiyo paTV kuburikidza neChromecast.
Disney + yako Apple TV
Kana isu tiri pakati pevane rombo rakanaka varidzi veApple TV mumba, tinogona kuishandisa ku kutarisa Disney + mune yemhando yepamusoro.
Kuti ushandise Disney + pane yeApple brand kamuri yekutandarira, tendeuka, enda kune system system, pinda iyo Disney + application uye upinde iwo magwaro ekuwana; kana iko kushanda kusipo, isu tinovhura yakatsaurirwa App Store, tsvaga Disney + uye isai pane chigadzirwa. Sezvo Apple TV yekutengesa inotsigira 4K UHD uye iHDR Nayo, zvichakwanisika kuona zvemukati zveDisney + nemhando yepamusoro, chero bedzi terevhizheni ichienderana neaya matekinoroji uye kana isu tiine yekukurumidza Internet mutsetse (sezvatotaurwa, kudhawunirodha 25 Mbps kunodiwa).
Kuunza Disney + kuterevhizheni yedu kunosungirwa kana isu takaita ino sevhisi yekushambadzira, nekuti mhando yemhando yepamusoro inongowanikwa nekugadzirisa kunyorera paSmart TV kana kushandisa imwe yedzimwe nzira dzinoratidzwa mune ino gwara. Kune vese vashandisi vane yakapusa flat screen screen isina smart mashandiro ingo tora Fire TV Stick kana Chromecast kuti uwane Disney + zvemukati nekukurumidza uye nyore.
Kana isu tiri mafeni makuru eiyo Ultra yakakwira tsananguro yezviri mukati, iwe uchave uchifara kuramba uchiverenga zvinyorwa zvedu Mashandisiro ekushandisa 4K paSmart TV mi Dzese nzira dzekutarisa Netflix mu 4K UHD. Kana, kune rumwe rutivi, isu tiri kutsvaga mamwe masevhisi ekuona anotenderera emakatuni paTV, ramba uchingoverenga gwara redu. Wona kutenderera macartoon pa internet, masaiti nemaapps emahara.
Chiyero cheJapan chehungwaru chichapedzwa mumaminitsi gumi nemashanu
Maitiro ekugadzira pixel art kubva kuPC, mafoni uye mapiritsi
Maitiro ekuwedzera kadhi paGoogle Play uye Apple Chitoro
Akanakisa Coding Apps
Iyo mitambo yakavhurika yepasirese yeApple ne iPhone
Maitiro ekudzora kumhanya kwemitambo paPC
Maitiro ekudzima ese sensors pane yako smartphone
Iyo yakanyanya kupfeka kumusoro uye fashoni mitambo yeApple uye iPhone
Mashandisiro ekushandisa eGPU paMacBook kugadzirisa 3D mashandiro
Maitiro ekudzima kunyorera pane Android, iPhone, iPad, uye Windows 10